Shiinaha Mashiinka daabacaadda daabacan ee tayo sare leh majaladda soo jiiday jiingado Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Huaguang
Tayada sare daabacan miiska daabacaadda ururinta majaladda jiingado
Oruxid Magazine File Box
Faahfaahinta Baakadaha: shan kombiyuutar oo ku jira polybag ama shuruudahaaga
Cku wareegsan majaladda faylka box waa kaliya mid ka mid ah sanduuqyada faylasha badan. Waa sanduuq furan oo badanaa ay u isticmaalaan shaqaalaha xafiisku kaydinta iyo kala soocidda. Way fududahay in la keydiyo oo la qaado faylasha.
Badanaa dukumiintiyo badan ayaa xafiiska yaala. Qaarkood waa muhiim oo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaalaa. Waxaa jira tixraacyo, mararka qaarkood loo tixraaco; Qaarkood waa dhif in loo baahan yahay waxayna badanaa fadhiistaan ​​bilaa camal. Haddii dukumiintiyadaas oo dhan la isu geeyo, waxay noqdaan kuwo nidaamsan oo aan sahlaneyn inaan eegno. Tani waa meesha feylka feylku ka soo galo.
Waxaan ubaahanahay dhammaan noocyada kala-soocida dukumiintiyada, iyadoo la tixraacayo muhiimadda iyo inta jeer ee isticmaalka la dhigayo faylasha qaybaha kala duwan, iyo calaamadda u dhiganta, sida: ku wargalinta feylasha fasalka, feylasha xogta, feylka diiwaanka iyo kaydinta faylasha, iwm, sidaa darteed waxaan u adeegsaneynaa sidoo kale waxay ku caddaan doontaa jaleecada, hel feylka aad u baahan tahay marka hore, si weyn u wanaajiya waxtarka shaqadeena. Isla mar ahaantaana, kaydka faylka ee hagaagsan ayaa sidoo kale muujin kara dhadhanka qofka iyo tayada shaqada, jawiga wanaagsan ayaa sidoo kale gacan ka geysta hagaajinta xamaasadeena shaqada.
Marka loo eego maaddada, feylka faylka waxaa loo qaybin karaa saddexda qaybood ee soo socda:
1: Sanduuqa feylka majaladda jiingado. Sanduuqa feylka majaladda jiingado ayaa leh qiimo aad u wanaagsan iyo ilaalinta deegaanka, oo caan ku ah suuqyada Yurub iyo Ameerika.
2: Feylka faylka caaga ah, nooca noocan ah tayada iftiinka faylka, qiimaha waa mid aad u fiican, wuxuu hayaa suuqa ugu weyn, laakiin maaddadan ku jirta faylka ma ahan mid xoogan, oo fudud in la jabiyo;
3: Diiwaanka faylka alwaaxa, noocan ah faylka faylka ayaa umuuqda mid qurux badan oo deeqsi ah, oo waara Aad loogu jecel yahay shaqaalaha xafiiska;
4, Faylka feylka birta, qaab dhismeedka feylku waa mid la isku halleyn karo oo adag, wuxuu qofka siin doonaa dareen nadiif ah oo qurux badan.
Qalabka, qaababka iyo cabbirka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha martida.
Hore: Xafiiska ama sanduuqa keydinta warqadda guriga oo leh awood ballaaran waa la laaban karaa
Xiga: Biyuhu, filimka fudud ama waraaqaha dhejiska daabacan ee matoorka leh duub
Kartoon tayo sare leh miiska daabacaadda kartoo ...